Manchester City oo u dhaqaaqday saxiixa Weeraryahankii hore ee Manchester United, Romelu Lukaku – Gool FM
(Manchester) 23 Nof 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa la soo warinayaa inay u dhaqaaqday soo xero gelinta bedelka weeraryahankeeda Sergio Aguero, kaasoo ay u aragtay Weeraryahankii hore ee naadiga Manchester United oo haatan ka ciyaara dalka Talyaaniga ee Romelu Lukaku.
Jariiradda The Telegraph ayaa Warinaysa in Manchester City ay hoosta ka xariiqatay inay la soo saxiixato Weeraryahanka Kooxda Inter Milan ee Romelu Lukaku intii lagu guda jiray xagaagii la soo dhaafay.
Qiimaha ay Inter Milan ku heshay weeraryahankii hore ee Man Utd waa 93 milyan oo gini oo u dhiganta 104 milyan oo euro ama 123 milyan oo dollar, si kastaba ha ahaatee waxay taasi la micno noqotay in Man City aysan wax heshiis ah la gaarin laacibkan.
Kooxda Citizens ayaa la filayaa inay suuqa ka raadiso weeraryahan cusub lixda bilood ee soo socota si ay isugu diyaariyaan bedelka Sergio Aguero, kaasoo si xor ah uga tagi kara xagaaga soo socda.
Xiddiga xulka qaranka Belgium ayaa kooxda Tababare Antonio Conte kaga soo biiray Manchester United sanadkii 2019-kii, wuxuuna ku jiray qaab ciyaareed aad u fiican tan iyo imaatinkiisii Talyaaniga, isagoo dhaliyay 43 gool 60 kulan oo uu saftay tartammada oo dhan.
Lukaku ayaa haatan dhaliyey sagaal gool sagaal oo uu saftay xilli ciyaareedkan, halka 27-sano jirkaan uu shabaqa soo taabtay 113 jeer 252 kulan oo uu saftay Premier League intii uu joogay England.